Qormooyinka Qorayaasha & fekradaha akhristayaasha. Qormooyinka Qorayaasha & fekradaha akhristayaasha.
7 Cashar oo laga bartay Doorashadii Guddoonka labada Aqal ee Baarlamaanka (Qormo)
Muxuu Xasan Cali Khayre uga duwan yahay Musharixiinta kale ee xilka Madaxweynaha..? (Qormo)
Macallin Farmaajow Mahadsanid: “5 Sano oo Casharro baraatiko ah” (Qormo Culus)
Warbixin laga qoray Xaalad Amni oo Xildhibaanada cusub Maanta ku qabsatay Afisyoone (Qormo)
Hirshabeelle oo shaacisay Qabashada Doorashada Laba kursi oo Adag (Akhriso Faahfaahin)
Qormo lagu Qiimeeyay Khudbadii Farmaajo ee 12 April 2022 oo qabsatay Baraha bulshada
Duqa Farmaajo wuxuu u muuqday Nin ummad iyo caalam kale la hadlaya (Qormadii Fiqi)
Waxaan Codsaday in Amb. Madeira lagu daro Liiska la cunaqabteynayo (Qormo culus)
“Ilaahow Farmaajo ummadda dhaafi oo haku soo celin Talada iyo Xukunka dalka (Qormo dareen leh)
Wasiir hore oo farriin culus u diray Xildhibaannada kasoo jeeda K/Galbeed (Qormo)